စိတ်ကူးထဲမှာ နေတိုးနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့သမီးလေး ရွှန်းရွှန်း - Cele Gabar
ပရဟိတမင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုနေရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာကနေတဆင့် မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကို ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်ပေးနေသလို သမီးလေးရွှန်းရွှန်းကိုလည်း သမီးအရင်းသဖွယ် အချစ်ပိုကာ စောင့်ရှောက်ပေးနေသူပါ။
မကြာခဏဆိုသလို ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး သွက်လွန်းတဲ့သမီးလေးရွှန်းရွှန်းအကြောင်းကို မျှဝေလေ့ရှိပြီး ဒီနေ့မှာလည်း စိတ်ကူးထဲရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ ရွှန်းရွှန်းရဲ့အဖြစ်ကို ပရိသတ်ကိုဖောက်သည်ချခဲ့ပါတယ်။ ရွှန်းရွှန်းနဲ့အပြန်အလှန် စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပုံကို ” အမကြီး ဘယ်သွားမလို့လဲ ???? (Shooting သွားမလို့) မင်းသားကဘယ်သူနဲ့တွဲမှာလဲ ???? ( နေတိုး နဲ့ ) ဟဲ့ ဘယ်လို အခန်းရိုက်မှာတုန်း ???? ( နေတိုးကဖက်လိုက်လို့ ရွှန်းက အဲလို ရှက်သွားတဲ့အခန်း) ” ဆိုပြီး ရွှန်းရွှန်းတစ်ယောက် စိတ်ကူးနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့အကြောင်းကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မေမေခိုင်နှင်းဝေကတော့ ထပ်ပြီးတော့လည်း ” ငါနော် ဟွန်း …မိတ်ကပ်လည်း သူ့ဘာသာလိမ်း… ထဘီဝတ်ပေးပါဆိုလို့ ဝတ်ပေးထားရတယ်.. နေတိုးလို ဆံပင်စည်းပေးတဲ့…. အိမ်း မိရွှန်းရေ လုပ်နေလိုက်” ဆိုပြီးတော့လည်း ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သွက်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုနေရတဲ့ ရွှန်းရွှန်းလေးကတော့ ကြီးလာရင်လည်း မင်းသမီးလုပ်ပြီး ပရိသတ်အချစ်ကို ထပ်ခြွေဦးမယ့် ပုံပါပဲနော်။ ပရိသတ်အချစ်တော်နေတိုးနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး နေတိုးအတိုင်း ဆံပင်စည်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ရွှန်းရွှန်းလေးရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post နိုင်ငံခြားက ပရိသတ်နှစ်ယောက်ဆီကနေ iPhone လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
Next post MV လေးအပြီးသတ်ရိုက်ကူးနေပြီမို့ မကြာခင်မှာ သီချင်းလေးတွေထွက်ရှိလာတော့မယ့် နေလင်းကျော်